Ogaden News Agency (ONA) – Ruushka & Turkiga oo Ka Heshiiyay Colaada Suuriya.
Ruushka & Turkiga oo Ka Heshiiyay Colaada Suuriya.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo dhiggiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku heshiiyay in laga shaqeeyo abuuritaanka deegaan ka caagan xasaradaha oo laga hirgelinayo gobolka muhiimka ah ee Idlib ee waqooyiga Suuriya.
Hadafka arrintani ayay madaxdani ku sheegeen sidii loo dhameyn lahaa dagaalka sokeeye ee Suuriya ka socda tan iyo sanadkii 2011-kii. Kadib marki ay dhamaadeen wadahadalada labadani hogaamiye, ayuu madaxweyne Erdogan ka sheegay magaalada Anqara in Turkiga iyo Ruushku ay doonayaan inay ka dhabeeyaan dhameystirka qorshahani.
Heshiiskan ayaa loo arkaa inuu tallaabo weyn oo horay loo qaaday u yahay bilowga wadahadalo nabadeed oo lagu soo dhameynayo colaada sokeeye ee Suuriya. Gobolka Idlib waxaa hadda maamula kooxaha Islaamiyiinta.